कृषि क्षेत्रलाई सहयोग नगर्ने हो भने ध्वस्त हुने देखिन्छ – Krishionline
काठमाडौं, जेठ । पाँच वर्ष भित्र मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणाको एक वर्ष वितिसकेको छ । अवको चार वर्षभित्र उत्पादकत्व दोव्वर गराउनका लागि कृषि क्षेत्रमा धेरै कुराको परिवर्तन हुनु जरुरी छ त्यसका लागि सरकारले आफ्दै लगानीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि सञ्चालन गरेको करीव ३ वर्ष पुग्न लाग्यो, तर उत्पादकत्व बृद्धि हुन सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भित्रको तरकारी जोनका रुपमा रहेको नुवाकोटको कृषि उत्पादनका बारेमा जोनका प्रमुख डा कमलराज गैरेसँग वैकुण्ठ भण्डारीले गर्नु भएको कुराकानीको अंश ः
० नुवाकोट तरकारी जोनले कसरी काम गरिरहेको छ ?
नुवाकोट जिल्लामा चारवटा स्थानीय तहका १५ वडालाई समेटेर तरकारी जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । यसको मुख्य उदेश्य चाहि काठमाडौंसँग जोडिएको जिल्ला भएका कारण तरकारी बजारका लागि नजिक भएका कारण तरकारी उत्पादन बृद्धि गरेर किसानहरुको आय आर्जन बढाउने नै यसको उदेश्य हो । विदेशबाट तरकारी ल्याउनु नपरोस् । नुवाकोटमा उत्पादन भएको तरकारीले तरकारी आयातलाई पनि प्रतिष्थापन गरोस् भन्ने यसको उदेश्य हो । त्यही अनुरुप तरकारी जोन गत वषदेखि शुरु भएको हो । किसान सम्मिलित जोन सञ्चालक समिति पनि हामीले बनाएका छौं । मुख्य रुपमा हामीले उत्पादनको पूर्वाधार र बजारको पूर्वाधारका लागि महत्व दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
० किसानहरु कत्तिको आकर्षित हुनु भएको छ ।
किसानहरु त धेरै नै आकर्षित हुनुभ एको छ । तर हामीले हाम्रा लागि कस्तो किसानहरुलाई उत्प्रेरित गरिरहेका छौं भने जुुन किसानले व्यवसायिक रुपमा तरकारी उत्पादन गरी विक्री वितरण गरिरहनु भएको छ । त्यस्ता किसानहरुलाई हामीले समेटेका छौं । व्यवसायिक रुपक तरकारी उत्पादन गरिरहनु भएका र गर्न चाहनु भएका किसानहरुलाई विभिन्न किसिमले सहयोहामीले गरिरहेका छौं । एउटा हामीले प्राविधिक सहयोग दिएका छौ. भने अर्को उत्पादन र बजारको पूर्वाधारका लागि सहयोग गरिरहेका छौं । त्यसका लागि एक सयवटा प्लाष्टिक घर निर्माणमा हामीले सहयोग गरेका छौं भने जोत्नका लागि कृषि यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिएका छौं । यसका लागि हामीले कृषि सहकारी, कृषि समूह र कृषि फार्महरुलाई १ सय १५ वटा मिनि टिलरहरु ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएका छौं । त्यसैगरी तरकारी उत्पादन गरिरहनु भएका किसानहरुले ढुवानीको समस्या भएको गुनासो गरेपछि समस्या समाधान गर्नका लागि स्थानीय तहलाई नै संलग्न गराएर अनुदानमा गाडीमा पनि उपलब्धगराएका छौं । यसकालागि लागि स्थानीय तह र जोनले ८५ प्रतिशत अनुदान दिएका छौं भने वाँकी सहकारीहरुले नै लगानी गर्नु भएको छ । यसले तरकारी उत्पादनका लागि किसानहरुको आकर्षण बढ्दै गईरहेको छ । तर तरकारीको मूल्यमा हुने उतारचढावले गर्दा उहाँहरुलाई केही गाह्रो भईरहेको छ ।
० किन त्यसो भएको अनुमान गर्नु भएको छ ?
किसानहरुले तरकारी बाली लगाउने समयमा तलमाथि गरिरहनु भएको छ । जुन बेला बाली लगाउनु पर्ने हो त्यो गरिरहनु भएको छैन । त्यसका लागि हामीले किसानहरुलार्य जानकारी पनि गराईसकेको छौं । यसले के पुष्टि पनि गर्दछ भने आगामी वर्षहरुमा नुवाकोटबाट प्रशस्त तरकारी बजारमा जाने छ ।
० तर तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरुले लागत मूल्य पाएनन् बढी विचौलियाहरु मोटाउँछन् भन्ने चर्चा र बहस पनि छ नि ?
कुरा ठिकै पनि हो । तर लागत मूल्य भनेको कति हो भन्ने एउटा कुरा छ । नेपालको कृषि व्यवसायिक भन्दा पनि जीविकोपार्जनका लागि मात्र भएको छ । निकै मिहिनेत गरेर छोराछोरी हुर्काए जस्तै हुकाएको तरकारीको भाउ निर्धारण अरुले गर्नु परिरहेको छ । तरकारीको भाउ निर्धारण विचौलियाले गरिदिनु पर्ने जसका कारण किसानहरुको चित्त दुखिरहेको छ । तर तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरुलाई नुवाकोटको हकमा बजार पनि भएका कारण घाटा नै हुने लागत मूल्य नआउने भन्ने हुँदैन । तरकारीमा घाटा हुने देख्दै देख्दिन । यो वर्षको कुरा गर्ने हो भने नुवाकोटका किसानहरुले घाटा व्यहोर्नु परेको छैन । तर तपाइँले भने जस्तै विचौलियाको समस्या भने देखिन्छ । यसलाई समाधान गर्नका लागि किसानलाई नै लिएर हामीले निकै नै छलफल पनि गरिरहेका छौं । त्यसका लािग हाट बजार समेत स्थापना गरेका छौं । प्रत्यक्ष रुपमा किसानहरुले उपभोक्ताहरुलाई विक्री गर्न सक्नु हुने छ भने हामीले जोनमा आवद्ध किसानहरुले पनि काठमाडौंका केही तरकारी बजारहरुमा स्टल लिएर नै आफूले उत्पादन गरेको तरकारीहरु विक्री वितरण गर्ने गर्नु भएको छ । किसान र स्टलसँग सिधा सम्पर्क भएकाले हामीले विचौलियालाई न्यूनिकरण गर्नका लागि प्रयास गरिरहेका छन् ।
० बजारीकरणको समस्या छैन ?्
अन्य जिल्लामा जस्तो नुवाकोटमा उत्पादित तरकारीका लागि बजारको समस्या छैन । त्यो समस्याबाट हामीले मुक्त गरेका छैनौं ।
० तरकारीको जोन स्थापना भयो तर समस्याहरु धेरै छन् भनिन्छ नि के के छन् समस्या ?
नुवाकोटको हकमा आगामी पाँच वर्षभित्र किसानहरुको आम्दानी दोव्वर बनाउन नसकिए किसानहरुले कृषि पेशा नै छाड्ने सक्ने देखिन्छ । यो नुवाकोटको मात्र समस्या होइन देशैभरीको समस्या हो । कृषि पेशा भनेको अरु कुनै पनि काम नपाएपछि गरिने पेशााका रुपमा लिइएको छ । कृषिमा संलग्नहरुलाई मानसम्मानदेखि धेरै कुरा छैन । पढेको व्यक्ति खेतमा जानु नै हुँदैन भन्ने मानसिकता छ त्यसलाई अन्तय गर्नु पर्दछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कृषि फाइदा मूलक क्षेत्र हो भन्ने कुरा बुझाउनु पर्दछ । हुन त यो वर्ष बजारको समस्या छैन तर अहिलेकै जसरी तरकारी उत्पादन बढ्ने हो भने अर्को वर्ष तरकारी निकै नै बढ्छ त्यसबेला बजारको समेत समस्या पर्न सक्छ । नेपालको समस्या नै बजार भएकाले छिमकी देश भारत, चीनले तरकारी बजारको व्यवस्था कसरी गरिरहेका छन् त्यस्तै शिक्षा हामीले लिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्रलाई तीनै तहका सरकारले सहयोग नगर्ने हो भने कृषि क्षेत्र नै ध्वस्त हुने देखिन्छ । त्यस्तो ध्वस्त हुनबाट जोगाउनु पर्ने अवस्था छ ।
० वर्तमान कृषिको सांगठिक संरचना हेर्ने हो भने त कृषि क्षेत्र ध्वस्त नै भइसकेको जस्तो देखिन्छ नि होइन ?
ठिक कुरा गर्नु भो । अहिले भएको पर्नुसंरचनाले कृषि निकै नै समस्या परेको छ । कृषि प्रसार आफैमा एउटा विज्ञान हो । त्यो पक्षलाई विर्षेर काम गरिएको जस्तो लागेको छ । कृषिमा भएको पुर्नसंरचना हेर्ने हो भने माटो विज्ञ एकातिर, बीउ विज्ञ एकातिर, किरा विज्ञ एकातिर पठाएर कृषि विकास कसरी हुन्छ । ती विज्ञहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर पो विकास गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यसलार्य पुर्नमूल्याकन गर्नु जरुरी छ । अर्का पाटो भनेको स्थानी तह, प्रदेश तह र संघमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको वीचमा समन्वयको अभाव रहेको छ । त्यो अभावलाई हामीले बेलैमा समाधान गर्न सकेनौ भने थप अर्को जटिल समस्या आउँछ । मानौ नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकामा कुनै रोगकिराको वा अन्य कुनै समस्या प¥यो भने सिंधै केन्द्रसँग सम्पर्क गरेर तत्काल त्यो समस्या समाधान गर्न सक्ने वातावरण बन्नु पर्दछ अहिले त्यो छैन ।– वैकुण्ठ भण्डारी
कृषि सचिव भन्छन् अनुदानमा दुरुपयोग भयो, तर खै त रोक्ने प्रयास ?